Shir madaxeedkii amniga Afrika oo maanta lagu soo gabagabeeyay dalka Ethiopia – Radio Daljir
Shir madaxeedkii amniga Afrika oo maanta lagu soo gabagabeeyay dalka Ethiopia
Abriil 17, 2016 9:38 b 0
Bahir Dar, 17 April 2016: Shir Madaxeedkii 5-aad ee Madasha Sare ee Amniga Qaaradda Afrika (Tana High-Level Forum on Security in Africa) oo muddo laba maalmood ah ka socday magaalada Bahir Dar ee dalka Jamhuuriyadda Federaalka Ethiopia ayaa maanta si rasmi ah loo soo gabagabeeyay.
Shirkan ayaa arrimihii ugu waaweynaa ee diiradda lagu saaray waxaa ka mid ah waxqabadkii shantii sanno ee la soo dhaafey, xaaladda nabadgelyada iyo amniga ee Africa, doorka qaaradda ee amniga caalamka, iyo fikrado is-dhaafsi la xiriira tayeynta amniga iyo xalinta xasaradaha.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ka mid ah madaxd shirkan ka qeybgashey ayaa sheegay in kulankan aaraadii la isku dhaafsadey ay waxtar u leeyihiin in Afrika ay mashaakilaadkeeda xal u hesho, doorna ku yeelato go’aamada arrimaha caalamka.
Madaxda shirkan ka soo qeybgashey waxaa ka mid ah Ra’iisul Wasaarahja Ethiopia, Hailemariam Desalegn, Madaxweynaha Togo , Faure Essozimna Gnassingbé, Madaxweynaha Jamhuuriyadda Suudaan, Field Marshal Omer Al-Bashir, Madaxweyneyaashii hore ee Botswana, Mauritania, Xoghayihii Guud ee hore ee Qaramada Midoobay Kofi Annan, Wakiilka Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay ugu qaabilsan Soomaaliya, Michael Keating, wakiilo ka socdey dalalka kale ee Afrika, beesha caalamka iyo khubaro caalami ah oo arrimaha amniga qaabilsan.
Guddoomiyaha Madasha Sare ee Amniga Afrika, Olusegun A. Obasanjo oo ah Madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Federaalka Nigeria, ayaa kula dardaarmey ka qeybgalayaasha inay si ficil ah uga shaqeeyaan sidii Afrika ay doorkeeda uga cayaari lahayd arrimaha caalamka.
Madaxweyne ku-xigeenka dawladda Puntland oo Garoowe kaga qayb galay munaasabad lagu xusayey Toddobaadka dhiraynta Puntland
Dhagayso Barnaamijka Saakay iyo Dunida 17 – April – 2016 – Wariye Cabdifitaax Cumar Geeddi (Studio Daljir Garowe)